XOG:- Wafdi uu hogaaminayo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo maanta ku wajahan magaalada Garoowe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Wafdi uu hogaaminayo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo maanta ku wajahan magaalada Garoowe
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heshay ayaa sheegaya in wafdi uu hogaaminayo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ay maanta ku wajahan yihiin magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Waxaa magaalada Garoowe haatan ka socda qaban qaabada soo dhaweynta wafdiga ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo maanta halkaasi ku wajahan, waxaana wadooyinka magaaladaasi maanta lagu arkayaa gaadiid badan oo lagu dhajiyay sawiradda ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sidoo kale inoo sheegay in uljeedka socdaalka uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ku tagaayo magaalada Garoowe uu yahay inuu halkaasi kaga dhawaaqo inuu yahay musharax ka qeyb gali doonno doorashada sanadkaan 2016-ka ka dhici doonta Soomaaliya.
Warar kale oo ilaa iyo haatan aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in uljeedka ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid uu magaalada Garoowe u tagaayo ay tahay olole uu ku doonayo inuu xubin baarlamaan uga soo helo degaanadda uu kasoo jeedo ee Puntland, halkaas oo ah goobta lagu dooranayo xildhibaanada labada aqal ee deegaanada halkaasi ka tirsan.
Dhinaca kale, ciidamada nabad-sugidda ee maamulka Puntland ayaa maanta lagu daadiyay dhamaan wadooyinka magaalada Garoowe, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka halkaasi, iyadoona ciidamadaasi ay muujinayaan feejignaan dheeri ah.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa markii uu gaaro magaalada Garoowe waxa uu halkaasi kula kulmi doonnaa salaadiintada iyo waxgaradka ku sugan magaaladaas, iyadoona sidoo kale ay jiri doonaan kulamo kale oo qeybaha bulshada uu la yeelan doono, si uu ugu soo bandhigo barnaamijkiisa siyaasadeed ee dalka.